ဂျီဆူး (အဆိုတော်၊ ၁၉၉၅ မွေးဖွား) - ဝီကီပီးဒီးယား
2019 Golden Disc Awards တွင် တွေ့ရသော ဂျီဆူး
(1995-01-03) ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၁၉၉၅ (အသက် ၂၅)
ဂန်ပို, ဂျောင်ဂျီခရိုင်, တောင်ကိုရီးယား
ကင်မ် ဂျီဆူး(ဟန်းဂု: 김지수; ၁၉၉၅၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃ရက်နေ့မွေး) သည် တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အတိုကောက်အနေဖြင့် ဂျီဆူး ဟုပို၍ လူသိများသည်။ သူမ၏ အနုပညာခရီးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် YG Entertainment လက်အောက်ရှိ Blackpink မိန်းကလေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။
၁.၁ ငယ် ဘဝ
၁.၂ ၂၀၁၁–၂၀၁၆; Career beginngings and Blackpink debut
၁.၃ ၂၀၁၇ - လက်ရှိ ; Solo endeavors and acting
၂ Personal life
၃.၂ Impact and influence
၅.၁ Variety shows
၅.၃ ဂီတ ဗီဒီယိုများ
၆ ဆုများနှင့် အမည်စာရင်းများ
ကင်မ် ဂျီဆူးကို ၁၉၉၅၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃ရက်နေ့တွင်   ဂန်ပို, ဂျောင်ဂျီခရိုင်, တောင်ကိုရီးယား   တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမတွင် အကိုတစ်ယောက်နှင့် အမတစ်ယောက် ရှိသည်။  [ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းမြစ် လိုအပ်သည်] ဂျီဆူးသည် အထက်တန်းပညာအဆင့်ကို ဆိုးလ်ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာ ကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁–၂၀၁၆; Career beginngings and Blackpink debut[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၇ - လက်ရှိ ; Solo endeavors and acting[ပြင်ဆင်ရန်]
သူမ၏ မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သော ကိုရီးယားအပြင် ဂျပန်နှင့်တရုတ်စကားလည်း ပြောဆိုနိုင်သည်။  
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် ဂျီဆူး နှင့် Rosé တို့သည် တောင်ကိုရီးယားအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ် Kiss Me အတွက် မော်ဒယ်များဖြစ်လာသည်။  ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဂျီဆူး သည် Dior အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ "Dior Beauty", Local Ambassador ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လတွင် ဂျီဆူး သည် Dior ၏ အလှကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Impact and influence[ပြင်ဆင်ရန်]
Gallup Korea ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဂီတဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်စစ်တမ်းတွင် ဂျီဆူး သည် မဲ ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီးတောင်ကိုရီးယားတွင် ဆယ်ယောက်မြောက် ထင်ပေါ်‌ကျော်ကြားသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။   ၂၀၁၉ ဧပြီလတွင် သူမသည် Instagram ပေါ်ရှိ K-pop idol များအနက် ဆယ်ယောက်မြောက် Follower အများဆုံးဖြစ်ပြီး Followers ၁၂.၈ သန်း ရှိသည်။  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဂျီဆူး သည် တောင်ကိုရီးယား စစ်မှုထမ်းဥပဒေ အရ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် စစ်သားများကို ကောက်ယူသော နာမည်ကျော် ကေပေါ့ပ်အမျိုးသမီးများ စာရင်းတွင်လည်း အဆင့်(၆) နေရာတွင် ရရှိခဲ့သည်။  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သူမ သည် Bessinussoffashion.com မှ ရွေးချယ်သော BoF 500 တွင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။  ဂျီဆူး သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ ပထမငါးလအတွက်အလှကုန်ကမ္ဘာတွင် ဦးဆောင်နေသည့် ထိပ်တန်းအကျော်အမော်ဆယ်ဦး နှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတို့တွင်ပါဝင်သည်။ "Bible of fashion" အမည်ဖြင့် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်နေသော ဂျာနယ်ဖြစ်သည့် Women's Wear Daily မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဂျီဆူး သည် ပိုစ့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လူအများကြားရောက်ရှိမှုတွင် ဦးဆောင်နေပြီး Rihanna နှင့် Kylie Jenner တို့က ဂျီဆူး၏နောက်တွင် ရပ်တည်နေသည်။  သူမသည် စုစုပေါင်းအဆင့်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့် (၇) တွင်ရှိပြီး သူမအကြောင်းအရာပါသော ပို့စ်သည် (၁၂) ခုသာရှိသည်။ သူမသည် ထိုစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် တစ်ဦးတည်းသော Asian ဖြစ်သည်။ 
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် ဂျီဆူး သည် Blackpink ၏ Comeback သီချင်းဖြစ်သော “ How You Like That” Teaser မှ သူမ၏ အလှအပကြောင့် Viral ဖြစ်သွားသည်။ Celebraties နှင့် Influencers များ၊ အထူးသဖြင့် တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ဂျီဆူး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော“ Two-bow hairstyle” နှင့်"Makeup"ကို ပြန်လည် ဖန်တီးမှုများ ခေတ်စားခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လည်း ပျံ့နှံ့သွားပြီးလူအများအား copycat ပုံစံ ဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Trend သည် နွေဦးရာသီတလျှောက်လုံး ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ 
2017–2018 SBS Inkigayo Host 
2019 Arthdal Chronicles Sae Na-rae tvN, Netflix
TBA Snowdrop TBA JTBC Lead role 
↑ ၂.၀ ၂.၁ Jisoo (September 30, 2019)။
↑ "A beginner's guide to Blackpink, the all-singing, all-rapping, all-female K-pop band" NME. January 4, 2019.
↑ [아이돌 고향을 찾아서① 우리 고향 아이돌 누가 있을까] (June 23, 2017)။[not in citation given]
↑ "WILD ROMANCE! Blackpink and Lady Gaga are teaming up" ABS-CBN. May 3, 2020.
↑ "BLACKPINK Members Spotted at Jisoo’s Brother Wedding Party"၊ May 11, 2019။
↑ "BLACKPINK members join Jisoo in celebrating the marriage of her older brother"၊ May 13, 2019။
↑ ၈.၀ ၈.၁ "Everything to Know About K-Pop Group BLACKPINK" Time. April 3, 2019.
↑ ၉.၀ ၉.၁ 블랙핑크 지수 "'인기가요' MC 하차, 블랙핑크로 돌아오겠다" 소감 (in ko) (February 4, 2018)။ May 29, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BLACKPINK's Jisoo & 2PM's Nichkhun Are Confirmed To Appear On Arthdal Chronicles (June 11, 2019)။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ 블랙핑크 지수, '설강화' 여주인공..'SKY캐슬' 제작진 조우[공식] (August 18, 2020)။
↑ 블랙핑크 지수X로제, 메이크업 브랜드 모델 발탁..트렌디 매력UP (September 27, 2018)။
↑ '블랙핑크' 지수, 디올 뷰티 로컬 앰버서더로 발탁 (December 18, 2019)။
↑ 디올의 뮤즈 지수, 청량한 여름을 닮은 (July 3, 2020)။
↑ 2018년 올해를 빛낸 가수와 가요 - 최근 12년간 추이 포함 (in ko) (November 30, 2018)။
↑ Gallup Korea names favorite singers, songs in 2018 (December 26, 2018)။ May 29, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Blackpink's Lisa most followed K-pop idol on Instagram (April 17, 2019)။ May 29, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sana de Twice es elegida la cantante más popular por los soldados de Corea del Sur (in Spanish) (November 10, 2019)။ June 13, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jisoo (September 30, 2019)။ October 6, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beauty Celebs, Influencers Keep Engaging Better Than Brands on Social Media (June 30, 2020)။ July 8, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beauty, Kylie Jenner, and Rihanna are the biggest influencers (July 6, 2020)။ July 8, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Black Pink vừa ra MV, chị em đã thi nhau làm tóc giống Jisoo, nhuộm tóc như Jennie, ai cũng xinh chất phát hờn (June 27, 2020)။
↑ Nike ist die weltweit sichtbarste Twitter-Marke (July 16, 2020)။
30. https://familytron.com/jisoo/4September, 2010.
ဂျီဆူး at HanCinema
ဂျီဆူး at Instagram
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျီဆူး_(အဆိုတော်၊_၁၉၉၅_မွေးဖွား)&oldid=538289" မှ ရယူရန်
Articles with failed verification since March 2020
ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကိုးအကားများ နည်းပါးသည့် ဆောင်းပါးများ since 4, September, 2020